Qe'eefi qabeenyi keenya barbadaa'ee jira, waan nyaannus waan uffannus hin qabnu - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Rakkoo nageenyaa uumameen namoonni 14 lubbuun isaanii darbeera
Aanaa Deeggaa ganda Ikochee Kusaayee jedhamtu keessa jiraataa kan turaniifi wayita ammaa baqatanii mooraa waajjira gandichaa keessa kan jiran, Obbo Abbii Azmeraw bilbilaan akka nutti himanitti, "ni ajjeefamtu baqadhaa nun jennaan, kamisa galgala maatii keenya waliin bosonatti baqannee, har'a guyyaa afraffaatti poolisiin aanichaa bosonaa nu baasee garanatti nu fide," jedhu.
Qe'eefi qabeenyi keenya barbadaa'ee jira, waan nyaannus waan uffannus hin qabnu, mootummaan nuuf haa dirmatus jedhaniiru.
Jiraattuun naannichaa biroo bilbilaan dubbifne Faaxee Indiris jedhaman, "guyyoota afuriif bosona keessatti waan nyaannu dhabnee, harmi nu gogee daa'ima keenyallee hoosisuu dadhabnee dararamaa turre, ammas deeggarsi nuuf godhamaa hin jiru," jedhani.
Obbo Abbii fi addee Faaxumaan dhalattoota naannoo Amaaraa, hongee bara 1977 mudateen garas deemanii achi qubatani dha.
"Mootummaatu as nu fide, mootummaan asi nu kaasuu qaba, wanti biraa wanti gaafannu hin jiru," jedhu obboo Abbiin.
Lakkoofsi namoota baqatanii waajjira poolisii fi waajjiraalee gandoota gara garaa keessatti dahatanii jiranii 1000 ol ta'eera.
Aanaaleen godina Buunnoo Beddellee rakkoon kun keessatti mudate bajata mootummaatiin namoota miidhamaniif deeggarsa akka taasisan murtaa'ee jira, akkasumas jiraattonni nyaataa fi uffannaa barbaachisu akka taasisan qindeessaa jirra jedhan Itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa fi Siyaasaa godinichaa fi koree dhimma kana hordofu kan qindeessan Obbo Moosisaa Lammeessaa.
Dabalataanis koreen jaarsolii biyyaa fi jiraattota keessaa walitti bahee qindaa'een, namoota qe'ee fi qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee deebisanii dhaabuuf hojiin eegalameera jedhu.
Hojiin yakkamtoota adamsuu fi seeratti dhiyeessuus hojjetamaa akka jiru himaniiru.
Rakkoon uumame addatti saba tokkorratti kan xiyyeeffate miti kan jedhan dubbi himaan Mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa, namoota du'an keessa 9 Oromoota yoo ta'an, kanneen hafan 5 sabaa fi sab-lammoota naannawa san jiraacha turan ta'uu BBC'tti himanii jiru.
Goodayyaa suuraa Namoota baqatanii waajjiraalee gara garaa keessa dahatanii jiran
"Rakkoo uumame kana gara wal-dhabdee sabaatti geeddaruuf qamotni carraaqqii godhan kanneen tokkummaa dhimmoota akka hongee Booranatti mudatee fi aramaa haroo Xaanaa dhabamsiisuu irratti saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti uumame diiguuf socho'anidha," jedhu Obbo Addisuun.
Koreen Komishiinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaatiin dhaabbate nyaataa fi uffata Finfinnee irraa fuudhee garasitti imalaa jira. Jaarsoliin biyyaa fi jiraattonni nannawaa sanaas deeggarsa barbaachisaa namoota miidhamaniif akka taasisan hojjetamaa jiras jedhaniiru.
"Rakkoon kun bakka poolisoonni Oromiyaa dafanii hin dhaqqabne, gandoota qonnaan bulaa magaalota irraa fagoo ta'an fi bakka rakkoon ni gaha jedhamee hin eegamne keessatti mudataa jira."
"Poolisiin Oromiyaa bakka rakkooleen uumaman kanneenitti argamee rakkoon dabalataa akka hin uumamne, lubbuu namaarras miidhaan akka hin geenye gochaa jiras," jedhu.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa namootni jeequmsa kutaalee Oromiyaa gara garaa keessatti ka'aa jiru kana dudduuba jiran kiraasassaabdota jechaa jira.
"Kiraasassaabdota hoggansa haaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatametu diraamaa hojjetaa jira. Diraamaan kutaan duraa waraana daangaa ture, kutaan lammataa ammo walitti bu'iinsa sabaa uumuudha," jedhu Obbo Addisuun.
"Hoggansi haaraa lafa albuudaa hektaara 50,000 seeran ala qabame deebisiise, doolaara seeran ala daddabarfamu dhaabsise, daldaltoota seeraan alaa 100,000 ol gara seera qabeessummaatti fide, lafa maqaa invastimantiin qabamee ture hektaara 75,000 ol deebisiisee qonnaan bultoota seeran ala buqqaafamaniif raabse."
"Tarkaanfii kanaan faayidaan isaanii kan jalaa tuqame, kiraasassaabdota dhiiga uummata Oromoo akka silmiitti xuuxaa turantu gochoota badii kanneen dudduuba jira," jedhu.
Ergamtoota kiraasassaabdotni kunneen kutaalee Oromiyaa gara garaa keessatti maallaqa kafalanii bobbaasan to'annaa jala oolcha jirra, eenyummaa kiraasassaabdota kanneenis qorannee yeroo dhiyootti ifa goona, wanti uummata keenya jalaa dhoksinu hin jirus jedhaniiru.
Mormii Garbagurraachatti har'a taasifameen dargaggoonni 3 ajjeefamani 3 ammoo madaa'an
''Namoonni dhuman fooniifi dhiiga keenya wanta aadaan ta'uu qabu ni goonaaf''
Sirna awwaalcha abbaafi ilma jalqabaa miidhamtoota halleellaa masgiida Niwziilaanditti
Duubatti harkifannaan lakkoofsa uummataa miidhaa maalii qabaata?
Godaantota hedduu kan qabu biyya kamidha?
Guyyaa gammachuu: Karaawwan shan gammadoo ittti taanu
Qondaaltota atileetiksii Raashiyaa hidhuf ajajni hidhaa bahe
'Oduu sobaa bara waraana Ololaa Afrikaa irratti gadhiifame'
Waa'ee buqqaatota Geediyoo ilaalchisee maal beektu?